AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver 4.8.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.8.9 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား ဗြီဒီယို ပေလယာမ်ား & အယ္ဒီတာမ်ား AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver
AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဤသည် AirPlay သို့မဟုတ်ကို DLNA protocol ကိုကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ Apple ထုတ်ကုန် PC, နှင့် Android devices ထဲကနေကိုစလှေတျမီဒီယာလက်ခံရရှိရန်ထိုကဲ့သို့သောသေတ္တာများသို့မဟုတ်တီဗီအဖြစ်ကို Android Device များပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသားတစ်ဦးလက်ခံသည်။ ဒါဟာပေးပို့သူမဟုတ်ပါဘူး။ app ကိုသင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာဿုံအလုပ်မလုပ်ပါဘူး အကယ်. , အီးမေးလ် (waxraindev@gmail.com) ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကို CONTACT, ငါတို့သည်ဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်ပါ။ ကျနော်တို့ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိ, ကျွန်တော်တစ်ဦးပြန်အမ်းငွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: သင်ဒီတစ်ခု install မလုပ်ခင်ကတခြား AirPin ဗားရှင်းကို uninstall လုပ်လိုက်သင့်တယ်။
AirPlay သို့မဟုတ်ကို DLNA ဖြစ်စေ protocol ကိုထိန်းချုပ်မယ့်မီဒီယာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ပဲသင့်ကိရိယာ၏ firmware ကိုအတွက်အတွင်းစိတ်မီဒီယာပလေယာမှပြန်ကျော့လိပ်စာပေးပို့သည်။ ဒါနဲ့လိုက်ဖက်မှုကွန်ယက်၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်သင့်မှာ Android သို့မဟုတ်ပေးပို့သူကိရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မူတည်ပါသည်။ သင်၏ကြိုးမဲ့ router ကိုအသက်ကြီးလွန်းလျှင်ဒါကောင်းစွာဖြစ်စေအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သငျသညျကို Android 3.1 သို့မဟုတ်၎င်းထက်ကြီးပေါ်မှာ install လုပ်ပါလျှင်, installation သို့မဟုတ် update ကိုအပြီးအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ဒီ app ကို run ပါ, ထို့နောက် Auto-Boot တက်ဝန်ဆောင်မှုကို Android စနစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
app ကို install လုပ်ပြီးသားနှင့်သင့်သေတ္တာများသို့မဟုတ်သင့် TV ပေါ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်အခြားစက်ကိရိယာကနေပေးပို့မီဒီယာကိုလက်ခံရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနောက်ခံပြေး။ ရုံကို DLNA / UPnP တီဗီ enabled ဘို့သင့်ကိုအလိုတခုတည်းနဲ့တူ။
Apple ရဲ့ AirPlay (ကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဖိုင်အရွယ်အစားရှိပါတယ်များအတွက် iPhone / iPad / iPod ကိုရဲ့ကင်မရာအားဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သောဗီဒီယိုများချောချောမွေ့မွေ့ကစားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ) ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ iPhone / iPad ကို / Mac ကိုထံမှမျက်နှာပြင်, ဂီတ, ဗီဒီယိုများ, သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုပေးပို့ပါ။
ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ Android Phone ကို / Tablet ကို / PC ကို "AirPlay / ကို DLNA Receiver" သင့်ရဲ့ Android device ကိုသို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားရန်အိမ်တွင်းမီဒီယာ server မှတစ်ဦးသဟဇာတကို DLNA / UPnP ကို ​​app / ကိုတိုက်ရိုက်မီဒီယာပေးပို့ဖို့အစီအစဉ်ကိုသို့မဟုတ်စီးနှင့်အတူသုံးပါ။
သင်၏ "AirPlay / ကို DLNA Receiver" device ကိုတစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် "ITV @" အဖြစ်သင့်အခြား devices များ app ကို / အစီအစဉ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အခြားထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြု. ရန်သင့်မီဒီယာပေးပို့မည်အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထံမှမီဒီယာပေးပို့ဖို့ဘယ်လိုပေါ်တွင်သင်၏တတိယပါတီအက်ပ် / အစီအစဉ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။
AirPlay နဲ့ကို DLNA (ဇွန်လ 2012 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်ပထမဗားရှင်း) နှစ်ဦးစလုံးထောက်ပံ့ပထမဦးဆုံး Android app ကို။
●ပံ့ပိုးမှု iOS6 / 7/8/9/10/11/12/13 (ထောက်ပံ့ AirPlay streaming များနှင့်ထင်ဟပ်)
နောက်ဆုံးပေါ် Youtube ကို AirPlay streaming များထောက်ပံ့● [*] ပထမဆုံး app ကို
● [*] AirPlay ဓာတ်ပုံကို streaming များအတွက်ပထမဆုံး App ကိုထောက်ပံ့ဆလိုက်ရှိုး
● [*] ပထမဆုံး app ကိုထောက်ပံ့ AirPlay password ကိုကာကွယ်ပေး
●ပံ့ပိုးမှုကို DLNA နှင့် UPnP
● [*] အဆိုပါတစ်ခုတည်းသော app ကို Android မှာအခြေစိုက်တီဗီများအတွက် Renderer နှင့် Player ကိုနှစ်ဦးစလုံးထောကျပံ့
● [*] တိုက်ရိုက်ကို DLNA / ဆမ်ဘာဆာဗာမှမီဒီယာကစားရန်ဆွဲထုတ်
●ပံ့ပိုးမှုက Windows streaming များနှင့်မှန်များ (AirPinPcSender နှငျ့အလုပျလုပျ)
●ပံ့ပိုးမှု AndroidSender (Android ကိုမီဒီယာ streaming များ)
●ပံ့ပိုးမှု Wi-Fi AP mode ကို
●အလိုအလျောက် startup လုပ် Service ကိုပိတ် Configure လုပ်လို့ရတဲ့
●ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက် mode ကို (ဗီဒီယိုအခါထိန်းချုပ်ဘက်ထွက်ပေါက်ကစားထား)
●ပံ့ပိုးမှုပြင်ပ Player ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွင်း● constant bug ကိုပြုပြင်တာတွေနဲ့မွမ်းမံ
★ "AirPlay / ကို DLNA Receiver" ကိုသင့်ရဲ့ PC အတွက်သင့်မီဒီယာဖိုင်များကိုပေးပို့ဖို့ "AirPinPcSender" connect (WinXP / Win7 / Win8) နှင့် "AirPlay / ကို DLNA Receiver (PRO)" မှသင့်ရဲ့ PC screen ကို mirror ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင့်ရဲ့ PC ကိုအတွက် AirPinPcSender Download လုပ်ပြီး install (http://www.waxrain.com) ။
●မှာ Windows Media ကိုလွှ: သင်၏ Hard Disk ကိုအတွက်သို့မဟုတ် Network Places / NAS အတွက်လွှမီဒီယာဖိုင်ညာဘက်ကလစ် နှိပ်. မီဒီယာဖိုင်ပေါ်တွင်နှင့်ကို select "ကို DLNA Play စဖို့" ။ ပြင်ပ SRT / မြည်းသည် / SSA အားစာတန်းထိုးထောက်ခံနေကြသည်;
●ကို Windows Screen ကိုထင်ဟပ်ပေးနေ: Windows ကိုပြ status bar မှာ "AirPinPcsender" ၏အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, "ကိုကို DLNA ကြေးမုံ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ဆဲသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိမထားဘူးဆိုရင်, http://www.waxrain.com/product_en.html ကိုသွားပါ။
AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver အား အခ်က္ျပပါ
densw12 စတိုး 1.17k 216.7k
AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.8.9
ထုတ်လုပ်သူ WaxRain Tech.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.waxrain.com/product_en_pp.html
App Name: AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver
Release date: 2019-08-14 08:48:32
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော စီပီယူ: x86, armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a, mips
လက်မှတ် SHA1: BA:E2:81:35:6A:17:5B:53:9D:31:73:D4:B6:A5:33:91:B3:4F:35:57
ထုတ်လုပ်သူ (CN): WaxRain
အဖွဲ့အစည်း (O): WaxRain Studio
နယ်မြေ (L): ChongQing
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): ChongQing
AirPin(PRO) - AirPlay/DLNA Receiver APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ